New Hope Hy-Vee Pitches in lagu taageerayo Shaqaalaha Dugsiyada Robbinsdale Aagga iyo Jawaabayaasha Koowaad | maqaalka
New Hope Hy-Vee Pitches in lagu taageerayo Shaqaalaha Dugsiyada Robbinsdale Area iyo Jawaabayaasha Koowaad
Abriil 27 2021
Mararka qaar deeqsinimada deriska waxay sameyn kartaa dhammaan farqiga inta lagu jiro waqti qallafsan. Iyo Abriil 27, Dugsiyada Aagga Robbinsdale, iyo gaar ahaan Dugsiga Dhexe ee Plymouth, waxay ahaayeen ka-faa'iideyste nimco derisnimo ka dib dhacdadii hubka ee dhacday horraantii maalinta.
Dhacdadaas oo dhan, dukaanka raashinka ee New Hope Hy-Vee ayaa la dhigay iyadoo la uruurinayo lana keenayo cunnooyin kulul, cunno fudud iyo biyo Dugsiga Dhexe ee Plymouth, iyadoo gacan ka geysaneysa hubinta shaqaalaha dugsiga, jawaabeyaasha ugu horreeya iyo maamulka degmada ayaa la quudiyey iyagoo shaqeynaya waqti adag.
Wixii ku saabsan New Store Hy-Vee Store Store Jack Stortenbecker, caawinta waxay ahayd go'aan fudud. “Waxaan ka shaqaaleynaa 500 qof dukaanka, badankoodna waxay ku nool yihiin beeshan,” ayuu yiri. Shaqaalaheena qaar waa waalid iyo waxay leeyihiin caruur dhigata (PMS). Marka caawinta waxay ahayd wax aan dooneynay inaan sameyno. ”
Ka dib markii aan ku xirmay Robbinsdale Area Schools oo aan bartay waxa loo baahnaa, Stortenbecker iyo kuwa kale ayaa markii hore is urursaday ka dibna keenay cunto fudud iyo biyo si ay u quudiyaan ilaa 150 shaqaale ah iyo jawaabayaashii ugu horeeyay. Isla markaa, shaqaalaha adeegga cuntada ee bakhaarka, oo uu hoggaaminayo maareeyaha iyo waalidka PMS Vanessa Isiordia, waxay soo ururiyeen 150 cunnooyin kulul iyagoo adeegsanaya cuntada ka timaadda xilliga cuntada ee dukaanku bixiyo, ka dibna waxay gacan ka geysteen in cunnada la gaarsiiyo shaqaalaha iyo sharci fulinta dugsiga.
Shaqaalaha dugsiga, maamulayaasha degmada iyo jawaabayaasha ugu horreeya ee Dugsiga Dhexe ee Plymouth, taageeradu waxay isbeddel dhab ah ku sameysay xilligii adag.
“Tani waa tusaale dhiirigelin u ah deriska oo caawinaya deriska. Qof ka mid ah bulshada ayaa arkay dad kale oo bulshada ka mid ah oo u baahan taageero, waqtigoodana ay u baahan yihiin, oo la dego si ay uga caawiyaan wax kasta oo ay awoodaan, ”ayay tiri Kormeeraha Ku-meelgaarka ah Dr. Stephanie Burrage. "Kama mahad celin karno deeqsinimada dhammaan kuwa jooga New Hope Hy-Vee deeqsinimadooda iyo taageeradooda."
Stortenbecker wuxuu sheegay in awood u lahaanshaha isla markiiba in la caawiyo bulshada waqtiga baahida ay tahay wax shirkadiisa ay ku faanto.
"Hy-Vee ka shirkad ahaan waxay runtii awood u siineysaa agaasimayaasha dukaamada in ay waxaas oo kale sameeyaan iyadoon loo baahneyn in silsiladda la sii wado - si loo go'aamiyo waxa bulshada u baahan tahay xilligan," ayuu yiri. “Waa nooca waxa naga caawinaya inaan dhammaanteen bulsho ahaan isku xirno. Waana ku faraxsanahay inaan gacan ka geysan karno inaan fududeyno maalinta kuwa u baahnaa. ”